Isgbọ ala kwesịrị ịme mmanụ, kedụ uru na ọghọm dị? Isgbọ ala kwesịrị ịme mmanụ, kedụ uru na ọghọm dị? - LFOTPP
Isgbọ ala kwesịrị ịme mmanụ, kedụ uru na ọghọm dị?
A na-ajụkarị na mbibi nke ụmụnna nwanyị na-eto eto ugbu a karia ma ndị mmadụ na-eji uwe ụgbọ ala a na-adịghị ahụ anya, mgbe ahụ, ọdịnala ahụ adịghị mma? Ime ihe nwere ike ichebe ihe osise nke ụgbọ ala. Taa, anyị ga-ekwu maka uru na ọghọm dị n'ime waks.
Ingnwe ụgbọ ala, dị ka a na-asụ, dị ka akpụkpọ ụkwụ mmanụ, bụ iji chekwaa eserese ụgbọ ala, usoro ịma mma nke ịme mmanụ ụgbọala na-enweghị imebi ihe osise mbụ ahụ na-enwu gbaa ma ihe ahụ adịbeghị mma.
Ingkwọ ụgbọ ala dị mma
(1) Ime mgbochi mmiri. Ihe wax ala ụgbọ ala nwere ike belata adhesion nke nsị mmiri na -emepụta site na 60% -90%. Ihe mmanụ ụgbọ ala nwere ọkwa dị elu nwere ike ịbelata ụmụ irighiri mmiri ndị dị na mmiri ahụ, nke dị larịị, belata ihe nlele nke mmiri na ìhè anyanwụ, ma mee ka ahụ ghara ịdị nbibi na mbibi.
(2) Mmetụta okpomọkụ dị elu. Mmetụta ọkụ dị elu nke waksị ahụ bụ iji gosipụta ọkụ ahụ nke ọma site n'akụkụ dị iche iche ma gbochie ìhè merenụ ịbanye na agba ahụ doro anya. Na-eme ka ịka nká nke isi ihe na-agbanwe ụcha, wee si otú a mee ka ndụ ọrụ dị elu nke agba ahụ dịkwuo ogologo.
(3) Mmetụta mgbochi. Site na iwepu ikuku na uzu na esemokwu nke ahu na-ese n’elu, obughi na enwere ike igbochi static eletrik nke ugbo ala, kamakwa ịchagide uzuzu nke ebubo ebubo na ugba ugbo ala nwere ike belata nke ukwuu.
(4) nchedo UV. A na-eme ka ọkụ ultraviolet dị na ìhè anyanwụ banye na mbara ihu, na mgbochi ụgbọ ala-UV na-echebara njirimara nke ray ray ultraviolet nke ukwuu, nke mere na belata ihe ndị na-eche nche ụgbọ ala.
(5) Mmetụta ọkụ. Otu n'ime ọrụ kacha dị mkpa nke ịme mmanụ ụgbọ ala n'oge glazing, ụgbọala waked nwere ike melite ịdị larịị nke agba ahụ ruo ogo dịgasị iche, ma weghachi anụ ahụ na agba na-egbuke egbuke. Ego ole ka ụgbọ ala na-eme?
Ọnụahịa nke ịme waksị na ụgbọ ala n'ozuzu ha dị gburugburu 200. Ọ bụrụ na ọ na-egbu maramara ma na-emekọ ihe ọnụ, ọ bụ ihe dị ka 500. Ọtụtụ mgbe, ọnwa 2-3 kwesịrị inye ụgbọ ala waksị. Cargbọ ọhụrụ ahụ bụ waks nke chọrọ ka a mee waksị!
(6) Egwu na mma. Enwere ike iji aka ma na - egbu mmanụ waksị ụgbọ ala mgbe enwere ntakịrị mkpụmkpụ n'elu agba ahụ. Ọ bụrụ na ihe ndị ahụ mebiri emebi adịghị njọ, a pụrụ ime polishing na arụ ọrụ n'otu ọrụ.
(7) Ọ nwere ike mepụta ihe nkiri siri ike ma na-adịgide adịgide n’elu esemokwu ahụ, nke nwere nguzogide kachasị na nhicha, mmiri ozuzo acid na ịka nká.
Carkwọ ụgbọ ala nwere abamuru na ọghọm ya. Ihe ọghọm ndị bụ isi bụ:
1, odi nfe iji mee ya
Carma mma nke ụgbọ ala ga-ekwupụta na ịme ihe na ịka akara, dị ka usoro mmezi agba agba ọdịnala, nwere ike ichebe ihe osise ahụ ruo oge ụfọdụ. Ha na - eji mmanu mmanu eme ihe, ya mere a na - eme ha dika ndi ozo di nfe ma mekwa ka "oyuyo di iche" na agba. Na mkpokọta, waksị ụgbọ ala na-amalite iberibe ya na ọkara otu ọnwa ma bụrụ nke a na-eme ya kpamkpam ka ọnwa gasịrị; glaze ụgbọ ala na-amalite imezi ihe ọnwa abụọ. Mgbe emechara wax na glaze ụgbọ ala, agba ahụ agaghị enwe ike ichebe ogologo oge.
2, odi nfe ịcha agba
Ihe waksị n'ozuzu nwere irighiri ihe, na urukpu ahụ na-adịghị ahụ anya na -eme ka ọ na-egbu maramara. Ọ bụrụ na usoro nke iji mee mkpesa bụ ka ọ na-egbu egbu na gburugburu, mgbe ahụ ụgbọ ala nke na-eme ọtụtụ oge ga-enwe okirikiri gbara agba.
3, anaghị eguzogide mmiri ọkụ
N'ihi mmetụta anwụ na-arụ na ọrụ injin, ọnọdụ okpomọkụ nke agba ahụ dị elu. N'oge ọkọchị, okpukpo okpukpu nke okpukpo okpukpo nwere ike ịdị nso "ebe a na-agba mmiri", ọbụlagodi n'oge oyi, ọ nwere ike iru ogo 30. N’ụdị dị elu dị otú ahụ, a na-agbaze wax ngwa ngwa ma gbazee, ma mee gbazee ahụ ga-agbasokwu unyi. Ihe mmebi nke agba elu ahụ. Glagbọ ala ahụ na-emekwa ka ọ dị ọcha ngwa ngwa n'okpuru ọrụ ọfụma.
4, odighi nfe
Mee nwere mmiri na-asọ mmiri, yabụ ọ bụrụ n'ụgbọala a na-akụ waksị ma dabaa oge ihu igwe, mmiri ahụ ga-agbaze waksị ahụ, nke na - agaghị egbochi ọcha na ịma mma. N'otu oge ahụ, n'ihi na wax dị na mmiri mmiri, ịsacha ụgbọ ala mgbe anụ ahụ butere ọtụtụ nsogbu. Ọ bụ ezie na glaze ụgbọ ala anaghị abata n'ime mmiri, ọ na-abanye na mkpuchi n'ime ahụ ụgbọ ahụ ma gharazie inye nchebe ọ bụla dị ka wax.